पशुपतिनाथ | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
पशुपतिनाथलाई तातो खिचडी
काठमाडौँ, १० पुस । मुलुकका विभिन्न भागमा हिमपात र ठण्डी बढेसँगै पशुपतिनाथलाई ठण्डीबाट जोगाउन तात्तातो खिचडी भोजन तयार गरिएको छ । योभन्दा अघि नाथलाई मनतातो
काठमाडौँ, ८ मंसिर। प्रत्येक वर्ष मार्ग शीर्षकृष्ण त्रयोदशीका दिन बेलुकी दिवङ्गत पितृका नाममा दीपदान र चतुर्दशीका दिन बिहान शतबीज छरी मनाइने बालाचतुर्दशी पर्व आज बेलुकीदेखि मनाइँदैछ । पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत देशभरका
नेपाली सेलिब्रेटीमा गोविन्दाको क्रेज
बलिउड सुपरस्टार गोविन्द अहुजा यतिबेला नेपालमा छन् । उनी चलचित्र निर्माता संघको आयोजनामा रगञ्जमा सुरु भएको ‘नेपाल स्वर्णिम चलचित्र महोत्सव’ मा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन् । नेपाली चेली सुनिता
बिरुपाक्षले झुक्किएर सम्बन्ध राखेपछि…
कसरी कलीयुगको सुरु भयो र कसले बिरुपाक्षको मुर्तिलाई पशुपतिनाथमा स्थापित गरे यो खोजिको विषय हो । भनिन्छ बिरुपाक्षको एकदमै गरीब परिवारमा जन्म भएको थियो । उनको जन्म पश्चात उनका पिता
पशुपतिनाथमा फेला पर्यो ४५ किलो सुन
काठमाडौं, २९ असोज । पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब ४५ किलो सुन चढाइएको तथ्य फेला परेको छ । यसअघि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वर्ष दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा ५६ वर्षको अवधिमा
काठमाडौं, १४ असोज । पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको भेटी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले दैनिक गणना गरी बैंकमा दाखिला गर्ने भएको छ । पशुपतिमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा कोषका सदस्यसचिव डा प्रदीप ढकाल
‘पशुपतिको पूजारी बदल्नुपर्छ’ (दीपशिखाको अन्तवार्ताको भिडियोसहित)
काठमाडौं, ६ असोज । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पशुपतिको पूजारी बदल्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले पशुपतिमा सबै पूजारी नेपाली
पशुपतिनाथ मन्दिर त सुरक्षित छैन भने सिंहदरबार र बालुवाटार कसरी सुरक्षित हुन्छ? काठमाडौं, ४ असोज । विश्व हिन्दु युवा संघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिले ४८ घण्टाभित्र धार्मिक अभियन्ताहरुलाई रिहाई नगरे देशव्यापी रुपमा
हरहर महादेव ! सँगै हरहर सेल्फी !
काठमाडौं । आधुनिक प्रविधिले तीर्थस्थलहरुको वातावरणमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ । श्रावणको अन्तिम सोमबार पशुपतिनाथमा दर्शनार्थीहरुको भीड लागेको थियो । दर्शनार्थीहरुले पशुपतिनाथको दर्शनमात्र गरेनन् सेल्फी खुबै खिचे । रिपोर्टर्स नेपाल
दीपेश केसी ‛‛बिरालो जतिसुकै डोकाले थुनेपनि म्याऊ गर्छ ।’’ आखिर त्यही भयो । गुठी प्रथा—पूर्वीय समाजमा समाजवादको उत्तम नमूनालाई सामन्तवादको एउटा स्वरुप भनियो । त्यो पनि नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत
काठमाडौं २३ जेठ । शुपतिनाथ मन्दिरको ५६ वर्षयताको अचल सम्पत्ति र परापूर्वकालमा राखिएको गुठीको जग्गाको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । पशुपतिनाथको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको यो पहिलो पटक हो ।